Iwo akanakisa engano dzazvino
Ongororo yenyaya dzazvino
Paradhiso Yechitatu, naCristian Alarcón
Hupenyu hahupfuuri semafuremu nguva pfupi pamberi pechidzitiro chechiedza chinokatyamadza chekupedzisira (kana chimwe chinhu chakadaro chichinyatsoitika, kupfuura fungidziro dzine mukurumbira nezvenguva yerufu). Muchokwadi, firimu redu rinotirova panguva dzatisingatarisiri. Zvinogona kuitika kuseri kwevhiri kutikwevera isu ...
Nyaya inoseka, naLuis Landero
Nhoroondo yenyaya yese yerudo ine capitalized, ingave yazvino kana iri kure, inogona kusasiyana zvakanyanya muchimiro chayo cherudo. Nekuti chinyorwa cherudo cheanodarika, sezvandinotaura chine chekuita nemhando yepingi, inotitaurira nezve manzwiro asingagoneke kupedzisa nekuda kwemamiriro emagariro, nekuti ...
Usatora korona yako kubva kwauri, naJannick Haenel
Isu tinoyemura inoyevedza nguva iyo murume anomuka kubva mumadota ake kuti azvipinze iye ega mukutiza kwekufashukira kwekufunga kwake. Iko kugutsikana kune kusangana uku pamwe nezvinoreva hupenyu kune chikonzero che epic. Kunyanya zvakadaro kana mukwende wekukundwa uchikwira pane imwe senge ...
Peji1 Peji2 ... Peji20 Zvadaro →